3D-cindezela kubhekwa impumelelo eyinkimbinkimbi kakhulu kwezobuchwepheshe kanye endaweni ebalulekile okufakiwe yokukhiqiza. Ngenxa amaphrinta ngakuthathu amathuba amasha kuyo yonke imikhakha yezomnotho. Kukholakala ukuthi esikhathini esizayo bangase luthathe ngisho izindlela yendabuko zokukhiqiza (ekwakheni, ekubunjweni, njll). Kulesi sihloko sizohlola lokho izinsimbi 3D-cindezela bese ubuchwepheshe zako ezisemqoka.
Kuyini 3D-iphrinta for metal
Lawa imishini ekhethekile evumela sufaka noma ijazi imikhiqizo siphelile. iphrinta okunjalo "ikhula" into ngokomzimba ngongqimba. Okusho ukuthi, okokuqala kwi computer ohlelweni ubunjiniyela kudala imodeli abonakalayo Ubukhulu ezintathu, zihlukaniswe izingqimba digital. Ngemva sokuqalisa into ku-3D-ukuphrinta inhloko iphrinta kuqala sokwenza insimbi ketshezi , noma powder uthululwa endaweni yesikhulumi ukuphrinta, obumba isendlalelo kuqala. Umshini ke osebenza ingxenye metal nokunye yesibili.
3D-iphrinta for metal ikuvumela ukwakha uhla elikhulu imikhiqizo kanye, ngenxa yobuchwepheshe, kungenzeka ukuthi umncintiswano izindlela classical zokukhiqiza metal.
Lokhu okusunguliwe iphrinta jikelele okuyinto ungasebenzisa kokubili ochwepheshe kanye abathanda abavamile. Metalloprintery ingasetshenziswa ukwakha izindawo angajwayelekile, izingxenye mechanical, ubucwebe. Futhi ukuba ukwazi ukudala imikhiqizo metal, ulingisa ngesandla kokuzihlanganisa. Futhi akudingi kumadivayisi angeziwe netindlela.
Industrial 3D-iphrinta for metal Ungaphrinta ngisho injini rocket. Ngakho-ke kuyoba cishe nsé imikhiqizo eyenziwe indlela evamile. Ngakho, metalloprinter kwenza indoda yesimanje ukudala izinto.
3D-ukuyiprinta ubuchwepheshe ngoba metal
Kuze kube manje, imikhiqizo zensimbi ubuchwepheshe ezimbili: laser nangoyinki-jet zokunyathelisa. Ahlanganisa yokuvikela ngocwazi akusheshi futhi olunembile metal, lapho kufanele wakhulelwa sibalo. Ngesikhathi esifanayo, onjiniyela baye basungula izindlela eziningana kulinywe.
Inkjet ukuphrinta ngakuthathu
Ukwakha metal izihloko jet ukuphrinta ingenye yezindlela ezindala kunazo zonke okufakiwe yokukhiqiza. Kuvumela kuyindlela engcono kakhulu yokusebenzisa izinsimbi okudlekayo. Kodwa lobu buchwepheshe kusebenza kuphela endabeni umfuziselo oluyinhlanganisela. Iqiniso lokuthi iphrinta 3D-inkjet ikuvumela ukuba uzitholele izinto noma iyiphi impahla ukuthi zingahlungwa zibe impuphu. Phakathi ukuphrinta, oqoshiwe impahla eluhlaza ixhunyaniswe polymers. Ngenxa yalesi izici kwezobuchwepheshe imikhiqizo siphelile ayikwazi kubhekwe metal ngokuphelele.
Ngaphezu kwalokho, kungenzeka ukuguqula wathola esiyinhlanganisela-metal onobuhle. Ukuze ufake lesi ezishile ezishisayo noma ancibilikise ka polymer futhi sintering kwensimbi oluyimpuphu. imikhiqizo enjalo metal akuzona eqinile, ngoba akheke ukungena nakwamanye amazwe. Engeza amandla ingatholakala impregnation lomunye metal. Ngokwesibonelo, into steel liyoba namandla uma cwilisa ngethusi.
Le ndlela yokudala imikhiqizo is ikakhulukazi elisetshenziswa isikhumbuzo nobucwebe umkhakha.
yokuvikela ngocwazi indlela
3D-ukuphrinta yokuvikela ngocwazi nqubo ihilela ukusebenzisa endaweni yesikhulumi izingcwecwe zensimbi amashidi, kumiswa laser noma ukuzisika mechanical, futhi gluing kubo ukuthola imodeli unhlangothi-ntathu. Le ndlela ikuvumela ukuthi usebenzise njengendlela material consumable, ngisho ucwecwe lwensimbi. izinto laminated awunawo amandla metal, kusukela ubuqotho babo esekelwe gluing amaphepha connectability.
Buhle lobu buchwepheshe ubhekwa izindleko iphansana kanye nekhono ukudala ezihlukahlukene izinto ncamashí imikhiqizo zonke-metal. Okuvame kakhulu yokuvikela ngocwazi ukuphrinta isetshenziswa ukudala izakhiwo.
Le ndlela 3D-ukuphrinta kusekelwe ukusetshenziswa ingxubevange izinto. Extruders ayatholakala iphrinta akakwazi ukumelana okushisa aphezulu. Ngakho-ke, ukudala izinto of amatshe okumsulwa kanye Alloys cishe kungenakwenzeka. Ngakho, onjiniyela izimpahla eseqala ukuveza esiyinhlanganisela izinto ezikhethekile. Isibonelo izixazululo ezinjalo sisetshenziselwa izinto ehlanganisa Thermoplastic neyethusi powder.
Umqondisi womshini yalolu hlobo mikhondo sufaka okuyinto ngokubukeka izakhamuzi zaseBosnia zifana kusukela imikhiqizo zonke-metal. Kodwa izakhiwo ngokomzimba lezinto ezifana kakhulu sibi kakhulu. Ngakho-ke, fusing Bokuhlela isetshenziswa kuphela ukudalwa onobuhle, izinto eziyizikhumbuzo izinto ingaphakathi. Manje onjiniyela ufuna izindawo zezimboni lapho kuvunyelwe ukusebenzisa lobu buchwepheshe ukukhiqiza. Ngakho, i-Thermoplastic nge yamathebhu metallic ingasetshenziswa ukuphrinta wesifunda amabhodi ahambisa izintambo zikagesi.
Okukhethwayo laser sintering neqondile
Okukhethwayo laser sintering metal ingasebenza hhayi kuphela indwangu eziqinile, kodwa futhi nge-Thermoplastic. Kube kwenzeka ukudalwa netintfo letingemadayimenshini lamatsatfu esebenzisa amadivayisi laser ngu sintering powder metal. Kaningi, ukunciphisa amandla laser emitters ku material metallic fusible sisetshenziswa phezu enamathela. Ezimweni ezinjalo, ngenxa yokwanda amandla umkhiqizo osuphelile kudinga extra sintering futhi impregnation yabo izinsimbi.
Enye indlela echazwe kuyinto oqondile laser metal sintering. Lobu buchwepheshe igxile ukusebenza okumsulwa powder metal hlobo. Ukuze ufinyelele kulesi sifiso, kukhona emakamelweni ekhethekile uphawu ogcwele 3D-amaphrinta nge igesi engaxubani namakhemikhali. Futhi, umshini wokunyathelisa isebenzisa okudlekayo Ukushisa lokushisa lapho lincibilike, kodwa ngawo ugcwaliseka ngokugcwele. Lokhu kunciphisa isikhathi ukunyathelisa futhi ulondoloze amandla laser izinhlelo.
Phrinta nge laser sintering senzeka izingqimba. On platform umsebenzi umshini kubangela ungqimba ezondile powder osuke usushisa kakade kabani izinhlayiya sintered phakathi kwakhe ne-ne ungqimba odlule. Ugongolo laser kushintsha njalo isiqondiso salo ngokusebenzisa uhlelo izibuko.
Laser sintering kwenza kube nokwenzeka ukudala izakhiwo eziyinkimbinkimbi ngaphandle izisekelo ezengeziwe. Ngakho, lobu buchwepheshe isetshenziswa ukudala ukucacisa izingxenye kungadzingeki machining okwalandela, kanye womshini onobuhle okuqinile yinkimbinkimbi kangangokuthi akunakwenzeka ukuba afeze asakazwe ezivamile.
Laser sintering ivumela ukusebenza ngensimbi, nickel Alloys, titanium, amatshe ayigugu kanye nokunye okufana nalokho. D.
laser okukhethwayo kanye electron ugongolo ukuncibilika izinsimbi
Nakuba iphethini etholwe kwensimbi laser-sintering, kukhona of high, banayo isicelo elinganiselwe. Isakhiwo ukungena nakwamanye amazwe lezinto siphelile micu. imikhiqizo enjalo azizifanelekeli nokuba angasetshenziswa ezimbonini, futhi iningi asetshenziselwa ukwakha mockups kanye prototypes. Ukuze kukhiqizwe eqinile futhi amelana ukucindezeleka onobuhle, onjiniyela ukuba baguqule ubuchwepheshe oqondile laser sintering laser ukuncibilika indlela. Kusekelwe ukwelashwa eqinile ukushisa powder metal ukuthola into eyohlobo. Izinto ezinyatheliswe le ndlela akusho ngempela kuhluke izakhiwo mechanical ezingokomzimba analogue ezivezwa izindlela zesintu.
In parallel nalokhu ubuchwepheshe esetshenziswa electron-ugongolo ukuncibilika. It ikuvumela ukudala izinto ukunemba okufanayo futhi isinqumo, kodwa kunezinzuzo ezithile. Ngakho, 3D-iphrinta yalolu hlobo metal esikhundleni electromechanical esibukweni izinhlelo ifakwe electron izibhamu. Lokhu kuvumela uhlelo umshini ukuba usebenze ngesivinini kuqhathaniswa eliphezulu, okuyinto kwandisa umkhiqizo we inqubo ngaphandle yezinkinga abalulekile. Ubuchwepheshe obunjalo elinye kakhulu ekukhiqizeni bendabuko yezimboni zisebenzisa imishini ezengeziwe (kuhhavini nomumo olubunjiwe).
Iphrinta laser kanye electron ugongolo ukuncibilika ikakhulukazi esetshenziswa ukwenziwa izingxenye jet izinjini kanye negesi abaphehla ugesi, lokufakelwa kwezitho wamathambo.
laser ngqo ukwakhiwa okufakiwe
3D-iphrinta for laser ngqo ukwakha isizinda isetshenziswa ukuze balungise imikhiqizo siphelile. Ubuciko umshini ezinjalo kuba isimiso sebethule izinhlayiya powder metal izingxenye ezilimele into futhi ukuncibilika yabo laser. Le ndlela libhekene lunye emincane futhi isetshenziselwa kuphela izinjongo ezimbonini.
Wanyathelisa iphrinta ikhanda yalolu hlobo idluliswa e izindiza emithathu ujikelezisa mayelana eksisi eqonde ngqo phezulu. Ngakho, okusebenza ngasiphi angle.
imishini enjalo ezisetshenziswa ukulungisa imishini eyinkimbinkimbi kanye nemikhiqizo wosayizi omkhulu. Ngokwesibonelo, zokulungisa izinjini izindiza.
Izindleko 3D-amaphrinta ngoba metal
Namuhla, kwemakethe ezahlukene imishini, ukuvumela ukudala ngakuthathu sufaka. Inani labo kuncike brand nowokunyathelisa ubuchwepheshe. Ngakho, izimboni 3D-iphrinta ukusebenza metal, lapho ukwazi ukuphrinta injini, amashumi elibiza ezinkulungwane zamaRandi. imishini Okuningi ezingabizi zingathengwa ishibhile, kodwa izinga imikhiqizo ziyoba zimbi. Ukuze uxazulule le nkinga, onjiniyela bayatfutfuka 3D-iphrinta for metal, intengo okuzoba ephansi kakhulu uma usukulungele ngokugcwele ukusetshenziswa.
TVEL - Uhlaziyo oluningiliziwe lokhu ...
6 amasu lokukholisa kusukela kumasevisi ekhethekile uzokwazi charm yimuphi umuntu
Online Business: Indlela Dala Online Store Yakho